ဗေဒင်တွေထဲက ကျွန်တော့်ရဲ့ တားရော့ခ်ကြယ်တစ်ပွင့် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဗေဒင်တွေထဲက ကျွန်တော့်ရဲ့ တားရော့ခ်ကြယ်တစ်ပွင့်
ဗေဒင်တွေထဲက ကျွန်တော့်ရဲ့ တားရော့ခ်ကြယ်တစ်ပွင့်
Posted by koyin sithu on Oct 27, 2011 in Creative Writing, Think Different | 12 comments
တားရော့ခ်ဗေဒင် ဆိုတာ ဘာလဲ???
ကျွန်တော့်ကို အဲ့ဒီလို လာမေးခဲ့ရင် အလွယ်ဆုံးနဲ့ အတိကျဆုံး ဖြေရမှာကတော့ “တားရော့ခ်ကတ်ပြားတွေထဲမှာ ကျရာ ကတ်ပြားတစ်ခုကို နိမိတ်ဖတ်၍ သင့်ရဲ့ကံကြမ္မာကို အဖြေရှာတဲ့ ဗေဒင်တွက်နည်း” ပါပဲ။ ဒါဆိုရင် ဒီလို ကတ်ပြားလေးတွေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ကံကြမ္မာ အကောင်းအဆိုးကို သိနိုင်ပါ့မလားလို့ သံသယပွားကောင်း ပွားမိပါလိမ့်မယ်။ တကယ်တော့ သင်တို့မှတင် မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်လည်း တစ်ချိန်က အဲ့ဒီအတွေးမျိုးကို သေသေချာချာကို တွေးမိခဲ့ဖူးပါတယ်။
ဒီလိုဖြစ်ခဲ့ရက်နဲ့ ဘာလို့ တားရော့ခ်ကတ်ပြားတွေအပေါ် ယုံကြည်နေတဲ့အထိ ဖြစ်လာခဲ့ရသလဲဆိုရင်တော့ အရှေ့တိုင်း ဗေဒင်နဲ့ အနောက်တိုင်း ဗေဒင်တွေရဲ့ သဘာဝတရားတွေ နည်းစနစ်တွေရဲ့ ကွဲပြားခြားနားပုံကို ပြောပြချင်ပါတယ်။
အတိုချုပ်ပြောရရင် အရှေ့တိုင်းဗေဒင်နဲ့ အနောက်တိုင်းဗေဒင်ဟာ အခြေခံ အယူအဆခြင်း လုံးဝ မတူညီဘူးဆိုတာ ကျွန်တော် သတိထားခဲ့မိလို့ပါပဲ။ အရှေ့တိုင်း ဗေဒင်မှာတောင်မှ အိန္ဒိယဘက်က ဆင်းသက်လာတဲ့ ဗေဒင်နဲ့ တရုတ်ပြည်ဘက်က ဆင်းသက်လာတဲ့ ဗေဒင်ဟာ လုံးဝ ကွဲပြားနေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ရွှေပြည်ကြီးမှာ တွင်ကျယ်နေတဲ့ ဗေဒင်တွက်နည်း အများစုဟာ အိန္ဒိယဘက်နွယ်ပါတယ်။ အဓိကက တွက်ချက်မှုအပေါ်မှာ အခြေခံတာပါ။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကံကြမ္မာကို စနစ်တကျတွက်ချက် အဖြေထုတ်ခြင်းဖြင့်သာ ခန့်မှန်းနိုင်မယ်လို့ အဲ့ဒီဗေဒင်ပညာက အခြေခံယူဆကြတယ်။
အနောက်တိုင်း ဗေဒင်ပညာကျတော့ ဒီလိုမဟုတ်ဘူး။ သူတို့ဆီမှာလည်း တွက်ချက်ရတဲ့ နည်းစနစ် မရှိဘူးလို့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီတွက်နည်းတွေက လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကံကြမ္မာကို အဖြေထုတ်လို့မရပါဘူး။
ဥပမာ – နက္ခတ်အစီးအနင်း တွက်ချက်မှုတွေ၊ ဂဏန်း ဗေဒင်တွက်ချက်မှုတွေဟာ လူတွေရဲ့ စိတ်ဓါတ်၊ အမူအကျင့်စတဲ့ စရိုက်လက္ခဏာကိုသာ ညွှန်ပြနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီလူ ရှေ့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတဲ့ ကံကြမ္မာကို မဖော်ထုတ်နိုင်ပါဘူး။
ဒီလို ကံကြမ္မာကို ကြိုသိချင်ရင်တော့ သူတို့တွေက တွက်ချက်မှုကို အားမကိုးဘဲ တားရော့ခ်တို့ Runes တို့လို မဲနှိုက်သလို ကျပန်းကောက်ယူပြီး အဖြေထုတ်ရတဲ့ ဗေဒင်ပညာတွေကိုပဲ ယုံစားကြပါတယ်။
တကယ်တော့လည်း လူတွေရဲ့ ကံကြမ္မာဆိုတာ အစီအစဉ်တကျ ရှိတာမျိုးမှ မဟုတ်တာ။ ဆူးကြုံနိမ့်မြင့် နားလည်ရခက်လောက်အောင် အမျိုးမျိုးကြုံတွေနေရတတ်တာပဲ။
အဲ့ဒီလို အစီအစဉ်မဲ့စွာ ဖြစ်သလို ကြုံတွေ့နိုင်တဲ့ ကံကြမ္မာကို ကျွန်တော် အယူအဆကတော့ အပင်ပန်းခံ တွက်ချက်မနေတော့ဘဲ ကံပေါ်မှာသာ ပြန်အားကိုးပြီး အဖြေရှာကြည့်တဲ့နည်းမျိုးက ပိုယုတ္တိတန် သလိုဖြစ်နေပါတယ်။
တားရော့ခ်ဗေဒဟာလည်း အမြင်အားဖြင့် ရိုးစင်းလွန်းတယ်လို့ ထင်ရပေမယ့် ဒီပညာမှာလဲ အလွန်အဖိုးတန်တဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တွေ ရှိနေပါတယ်။ ပြီးတော့ ယုံကြည်လျှင် ယုံကြည်သလောက် ဒက်ထိကွက်တိ အကျိုးပေးနိုင်စွမ်း ရှိတယ်ဆိုတာ မိတ်ဆွေတို့ ဗေဒင်မေးမယ်ဆိုရင် လိုက်နာရမယ် အချက်တွေကို တင်ပြပေးရင်း နိဂုံးချုပ်လိုက်ပါတယ်။
တားရော့ခ် ဗေဒင် မေးတော့မယ်ဆိုရင်…
၁။ ဗေဒင်တိုင်းမှာ အဓိက အခြေခံတာက ယုံကြည်မှုပါ။ ဗေဒင် မေးတဲ့အခါမှာ သင်ထားရှိရမှာက သင့်ရဲ့ ကံကြမ္မာကို နတ်မျက်စိလို တိတိကျကျ ဖော်ထုတ်ပေးနေတာပါလားဟု ယုံကြည်ထားရပါမယ်။
၂။ ဗေဒင်မမေးခင် နေထွက်ရာ အရှေ့အရပ်ကို မျက်နှာမူပြီး ကိုယ်ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာအလိုက် မှန်းမျှော် ကန်တော့ခြင်း ပြုရပါမယ်။
၃။ မေးတဲ့အခါမှာ ကိုယ်ခန္ဓာ၊ အ၀တ်အစား သန့်သန့်ရှင်းရှင်းရှိရမယ်။ စိတ်တွေအရမ်းရှူပ်ထွေး မနေရဘူး။
၄။ ပြီးတော့ ရရှိလာမယ့် ဟောကိန်းတွေပေါ်မှာ လှောင်ပြောင် ရယ်မောခြင်း မပြုရပါဘူး။
(ဦးဖက်တီးက ဗေဒင်တွက်ခဲ့ဖူးတဲ့အကြောင်းတွေ၊ ဘာလို့ မှန်နေရတာလဲ??? ရေးတော့.. ကျွန်တော်လည်း တားရော့ဗေဒထဲက တတ်သိနားလည်သလို ကိုယ့်ရွာသားတွေ နားလည်အောင် ရေးလိုက်ရပါတယ်… နောက်ပိုင်း တစ်ခုသော ကာလက ကျွန်တော့်ထံသို့ ဗေဒင်လာမေးကြသော သူတွေရဲ့ အကြောင်းနဲ့ ကျွန်တော် ဗေဒင်ဟောခဲ့ရတဲ့ ဆူကြုံ၊ နိမ့်မြင့် အတွေ့အကြုံတွေကို ဆက်ရေးပေးဖို့ စဉ်းစားမိပါတယ်။ တားရော့ခ်ဗေဒကို ကျွန်တော့်အား အလင်းဥာဏ်ဖွင့်ပေးခဲ့သော သင်ဆရာ၊ မြင်ဆရာ ဖြစ်တဲ့ အဘ ဒေါက်တာမင်းသိင်္ခကို ဒီနေရာမှ ဦးညွှတ်မိလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ…)
ပို့စ်ထဲမှာ ရေးဖို့ မေ့ကျန်သွားခဲ့လိုပါ…
ကျွန်တော် ဗေဒင်တွက်တတ်ပါသည်။ သို့သော် ဗေဒင်ဆရာတစ်ယောက်လုံးဝမဟုတ်ပါ…
ထို့အပြင် ဗေဒင်ဆရာ အာဝါဒေးများကို မကြာခဏတွေ့နေရပါသည်။
(ယတြာ သောင်းသိန်းဂဏန်းတောင်းပြီး လုပ်စားနေကြတာ ခံနေတဲ့ လူတွေလည်း
ဦးနှောက်မရှိကြပါ။ ယတြာဆိုတာ အချက်သိရင် တစ်ပြားမှမကုန်ပဲ အခက်အခဲတွေ
ထို့ကြောင့် (သင် ဗေဒင်ပညာကိုယုံပါ။ … ဗေဒင်ဆရာကို မယုံပါလေနှင့်)
(ဗေဒင်ဟောပါ… ဗေဒင်ထဲမှာတော့ သင်မပါသွားပါစေနဲ့) အဘခက ပြောခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်လည်းဗေဒင်ပညာနဲ့လည်း အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ဘယ်တော့မှမပြုဟု
သို့သော် ရဲဘော်ကြီးများဖြစ်သော ပေ၊ ပေါက်၊ လူး တို့အဖွဲ့မေးလာလျှင်တော့
ဒီလိုလုပ်ဗျာ။ ဦးဖက်နဲ့ ကိုရင် တယောက်ကိုတယောက် ဗေဒင်တွက်ကြည့်။ ပိုမှန်သူက ဆရာကြီး၊ လျော့မှန်သူက ဆရာလေး။ ကျနော်တို့က တပည့်တွေပေါ့။
ဦးကြောင်ကြီး …. ကြောင်မင်းဘယ်တော့ဖြစ်မလဲ.. မင်းသက်ဘယ်လောက်ရှည်မလဲ…
တွက်ပေးမယ်… မှန်လို့ ကြောင်မင်းဖြစ်တဲ့နေ့..
ကြောင်မင်းဖြစ်ရင် ကိုရင့်ကို မင်းဆရာတော်ခန့်မယ်၊ သင်္ကန်းဝတ်နဲ့ ပုဏ္ဏားရာထူးပေးလို့ ဘယ်ဖြစ်ပါ့မလဲ။
တစ်ကယ် တတ်တဲ့လူတွေဟောတာကို ပြောတာပါ..
နှာဘူး ဗေဒင် ဆာတွေကိုပြောတာတော့ ဟုတ်ဘူး..
ကိုရင်စည်သူပြောတဲ့..တားရော့ခ် ဆိုတာလဲ ယုံပါတယ်ဗျ
တစ်ခုရှိတာက ကိုယ်ကလဲ ယုံယုံကြည်ကြည်ရှိရမယ်..
တားရော့ခ် ဟောပေးတဲ့လူကလဲ ကျလာတဲ့ ကံကြမ္မာအချပ်ထဲက နိမိတ်တွေကို ကွန့် ပြီး ဟောနိုင်တဲ့
ဥာဏ်ရှိဖို့ လဲ လိုတယ်ဗျ..
ရဲဘော် ပေတော့ လာဟောမှာသေချာတယ်..ဘိုစည်သူရေ..
မိန်းမယူဖို့ ..ရက်ကောင်းရက်မြတ် တွက်ချင်လို့ ဆိုလားပဲ..တွက်ပေးလိုက်ပါဦး..
” ရဲဘော်ကြီးများဖြစ်သော ပေ၊ ပေါက်၊ လူး တို့အဖွဲ့မေးလာလျှင်တော့
အားနာနာနှင့် ဖြေပေးပါ့မည်… ” ဆိုတော့
ကျန်တဲ့ ရွာသူ၊ရွာသားတွေကရော မေးလို့မရဘူးလား
တားရောဒ် ဗေဒင် တခါ သွားမေးတာ ဗေဒင်ဆရာ ကဒ်ဆွဲ ခိုင်းလိုက် ကပေါက် တိ ကပေါက်ချာ ကဒ်တွေ ထွက်လာလိုက်နဲ့.. အဆင်မပြေ ဖြစ်ပြီး ရေမွေးကြီးပဲ ဖြန်းနေတာ တွေ့တယ်။ သိပ်အမှန်လှချည်းတော့ မတွေ့ဘူး.. ဗေဒင်ဆရာ ဆီမှာ ကောင်းကောင်း မနေချင်လို့လားတော့ မသိဘူး။
ဒီလို လုပ်ပါလား.. ကွန်မန်း ပေးတဲ့ လူတွေ ကို တားရောဒ်ကဒ် ဆွဲပြီး မေးလိုက် ပြီးရင် reply မှာ အခု ဘာမြင်တယ် ညာမြင်တယ် ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ်ပေါ့.. ရေးလိုက်ပါလား..
မဆူး >> တားရော့ခ်သွားမေးတာ မမှန်ခဲ့တာ အချက်သုံးချက်ကြောင့် ကျွန်တော် မြင်မိပါတယ်..
၁။ ဗေဒင်ဆရာကိုယ်တိုင် တားရော့ကို နှလုံးသားနဲ့ မကျင့်ကြံထားသူ (တားရော့ခ်အပေါ် ယုံကြည်ချက် မပြင်းထန်သူ ဖြစ်နေလို့ပါ…) တကယ်ပြောရရင် အဲ့လောက်အဆင့်နဲ့ မလုပ်စားသင့်သေးပါဘူး။
၂။ ထိုကဒ်တွေရဲ့ အဓိတ်ပါယ်ကို နှလုံးသားဖြင့် လက်ခံနားမလည်သူ (တချို့ကတ်တွေဟာ အဆိုးနိမိတ်ဆိုပေမဲ့.. ကိုယ့်နှလုံးသားထဲမှာ အကောင်းလို့ ခံစားရရင် အကောင်းဟောရပါတယ်… ဒါက ဗေဒင်ဆရာနဲ့ တားရော့ခ်ကြားက ဆက်သွယ်ချက်ပါ… ဥပမာ – မိခင်ကျန်းမမာလို့ တားရော့ခ်ဗေဒင်ကဒ် သွားမေးမယ်.. ကတ်က သေမင်းကတ်ကျတယ်.. ဒါဆို ခင်ဗျားအမေသေမယ်လို့ သွားဟောရင်ကွက်တိလွဲသွားမှာပါ။ ရောဂါတွေသေပြီး ဆရာကောင်းနဲ့ တွေ့ပြီး ပြန်ကျန်းမာလာပါမယ်.. ဟောရပါတယ်..)
၃။ ဘယ်ဗေဒင်ဆရာဖြစ်ဖြစ် Will power (သမာဓိ) နည်းနည်းတော့ ရှိအောင် လုပ်ထားရပါတယ်။ ကိုယ့်ဟာကိုယ်တောင် စိတ်မတည်မငြိမ်ဖြစ်နေတဲ့ ဗေဒင်ဆရာက
သူများရဲ့ အခက်အခဲကို တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ဟောပြီး ဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါ့မလဲ…။
ပို့စ်မှာ တင်ထားတဲ့ အချက် (၄)ချက် မပြည့်စုံပဲနဲ့ ကျွန်တော် ဘာဖြစ်တယ်၊ ညာဖြစ်တယ်နဲ့
မဟောတတ်ပါခင်ညာ… ခုလောလောဆယ် မြင်တာပြောရရင် ကွန်ပျူတာကြီး မြင်ပါတယ်လို့
ပေါ်လာပြီ ၊ ပေါ်လာပြီ
ရွက်ပုန်းသီး ဗေဒင်ပညာရှင်ကြီး အဂ္ဂမဟာဝရုန်းသုန်းကား ကိုရင်စည်သူ ဆိုတော ဗေဒင်ကဝိ ဆိုတာ
ရှေ့ဆက် ၊ အလုပ်အကိုင် ကောင်းမကောင်း ၊ စီးပွားလမ်းကြောင်း ဘာညာသာရကာ နေကြာကွာစေ့
အကုန် တိုင်ပင် ဖို့ ဗေဒင်ကဝိ ကိုရင်စည်သူ့ ဆီဘဲ အရင်ပြေးခဲ့ဘီ ဗျို့ 
ဗေဒင်ဆိုတာက လူတွေရဲ့ ယုံကြည့်မူအပေါ်မှာ အခြေခံတာပါ။ ဒီလို သဘောတရားက ခုနောက်ပိုင်း ခေတ်ကို ပြောတာပါ။ ဟိုး..အရင်တစ်ချိန်တုန်းကလို သူတို့ဟောထားတဲ့ အတိုင်း မဖြစ်ရင် သေစား သေစေဆိုတဲ့ အာမခံချက်ပေးတဲ့ ဗေဒင်ဆရာတွေ မရှိသလောက် နီးပါး ဖြစ်သွားပါပြီ။ ဥပမာ ကိုယ်က ဗေဒင်မေးတော့မယ်ဆိုရင် ဗေဒင် ပညာအပေါ် ယုံကြည်ချက် ရှိရပါမယ်။ မရှိခဲ့ရင် မမှန်နိုင်ပါဘူး။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ တစ်နေ့တာမှာ ကောင်းတာလည်း ရှိပါတယ်။ ဆိုးတာလည်း ရှိပါတယ်။ ကြည့်တတ်ရင်ပေါ့။ ပြီးတော့ ဗေဒင်ဆရာ တစ်ယောက်က သာမန်လူတွေထက် ပိုပြီး အမြင် စူးရှရပါမယ်။ များသောအားဖြင့် ဗေဒင် လာမေးတဲ့ သူများဟာ အခက်အခဲ တစ်ခု ရှိလို့ လာမေးကြတာ များပါတယ်။ ဒါကြောင့် မေးလာတဲ့ လူက ဗေဒင် ပညာကို အယုံအကြည် ရှိတယ်ဆိုရင် ဗေဒင် ဆရာ ဟောတဲ့ ဟောချက်ကို နားထောင်ပြီး လိုက်နာမယ်ဆိုရင် စိတ်ပညာနည်းအရ အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။ အခက်အခဲဆိုတာက စိတ်နဲ့ပဲ သက်ဆိုင်ပါတယ်။ အောင်မြင်မူ၊ ကျဆုံးမူဆိုတာကလည်း စိတ်နဲ့ပဲ ဆိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် စိတ်ကို တွန်းအားပေးရင် မအောင်မြင်နိုင်စရာ အကြောင်း မရှိပါဘူး။ ဗေဒင်ဆရာက ခင်ဗျား ဒီနေ့ ကံကောင်းမယ်လို့ ဟောလိုက်ရင် ကံကောင်းပါလိမ့်မယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လူတွေမှာ ကံကောင်းခြင်းနဲ့ ကံဆိုးခြင်းက အမြဲလိုလို ရှိနေတတ်ပါတယ်။ ငွေဝင်မယ် ဆိုရင် လည်း ၀င်ပါလိမ့်မယ်။ လူတွေရဲ့ တစ်နေ့တာမှာ ငွေဆိုတာက ၀င်နေပါလိမ့်မယ်။ မိဘက မုန့်ဖိုးပေးလို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ အင်း…ခင်ဗျား ဒီနေ့အတွင်းမှာ ရည်စားရလိမ့်မယ်လို့ ဟောတဲ့ ဗေဒင်ဆရာကိုတော့ မတွေ့ဖူးသေးပါဘူး။
လင်းငယ်… >> ဗေဒင်ဆရာတစ်ယောက်မှာ အနည်းဆုံး သမာဓိဆိုတဲ့ စိတ်စွမ်းအား
((လူတွေရဲ့ တစ်နေ့တာမှာ ငွေဆိုတာက ၀င်နေပါလိမ့်မယ်။ မိဘက မုန့်ဖိုးပေးလို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ အင်း…ခင်ဗျား ဒီနေ့အတွင်းမှာ ရည်စားရလိမ့်မယ်လို့ ဟောတဲ့ ဗေဒင်ဆရာကိုတော့ မတွေ့ဖူးသေးပါဘူး))
ကျွန်တော်လည်း အဲ့လို သေးသေးလေးတွေကို ဟောတဲ့ ဗေဒင်ဆရာကို
ကျွန်တော်လည်းခုထိမတွေးဖူးသေးပါ…။ ဘယ် ဗေဒင်ပညာရှင်အစစ်မှလည်း ဒီလောက်လေး
အဲ့လောက်သေးသေးလေးတွေ သိချင်ရင်လည်း ကိုယ့်ယုံကြည်ချက်နဲ့ကိုယ်
လက်ထောက်ဗေဒင်စာအုပ်လေးတစ်အုပ် ၀ယ်ပြီးသာ တွက်ကြည့်ပါ။
ကြားချင်လို့ ဗေဒင်ဆရာဆီသွားတာထက်တော့ ပိုမှန်ပါလိမ့်မယ်…
ဒါဆို ခင်ဗျားကို တစ်ခုမေးဦးမယ်… ကျုပ်တို့ ဘုရားရှင်က မွေးကာစမှာ
ဖခမည်းတော်က ဗေဒင်ပုဏ္ဏားတွေ ခေါ်တွက်ခဲ့တယ်.. တစ်ဦးတည်းကသာ
ဧကန်အမှန် ဘုရားစင်စင်ဖြစ်မှန်လို့ ဟောပြီး တောထဲမှာ ရဟန်းအဖြစ်သွားစောင့်နေခဲ့တယ်..
အဲ့ဒါကျတော့ကော ဗေဒင်ဆရာပြောတဲ့အတိုင်း ဘုရားဖြစ်အောင်လို့ ကျုပ်တို့ မြတ်စွာဘုရားက
ကျင့်လိုက်တာလား… ခင်ဗျားပြောတဲ့ ဗေဒင်ဆရာက စိတ်တွန်းအားပေးလိုက်တဲ့ အကြောင်းကိုတော့ ကျုပ်အကျိုးအနေနဲ့ လက်မခံပါဘူး။ ခင်ဗျားပြောတာက ဗေဒင်လိုင်းမဟုတ်ပါဘူး… စိတ်ပညာရှင်တွေ တောင်လုပ်နိုင်တဲ့
အပိုင်းတွေပါ… ခင်ဗျားပြောတာ လုံးဝဗေဒင်ပညာနဲ့ မသက်ဆိုင်ပါဘူး…
စိတ်ပညာ သက်သက်လို့ ကျုပ်မှတ်ယူပါတယ်… ဆက်စပ်မှုရှိတယ်… ဗေဒင်နဲ့ မသက်ဆိုင်ပါ..
ကျုပ်က အကျိုးအနေနဲ့ လုံးဝ လက်မခံပါဘူး…